လက်ဖြင့်ကိုင်ထားသောမြက်ပင်ဖြင့်ပြုလုပ်သောလက်ပုံ silage baling စက်သည်စတုရန်းပုံတူစက်ကိုပြုလုပ်သည်
ဤလက်သည်မြက်ပင်ပုံနှိပ်စက်ကို အသုံးပြု၍ မြက်ပင်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်နိုင်သည်, ကောက်ရိုးသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အရွက်, စက္ကူ, ကတ်ထူပြား, လယ်ယာမြေစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, စသည်တို့,ဒီ Bales ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုလျှံပစ္စည်းများသိုလှောင်တိရိစ္ဆာန်များသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုကြသည်အဖြစ်အရာအများအပြားအားသာချက်များရှိပါတယ်. ကောက်ရိုးသည်ကောက်ပဲသီးနှံအပင်များ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးကောက်ပဲသီးနှံများကိုဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်. ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ဖွဲများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျန်ကြွင်းသည်; ဒါ့အပြင်စက်ရုံ၏အညှာအဖြစ်လူသိများသည်. အာဖရိကသည်ဇာတိသီးနှံပင်များစွာနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်, ဒီနည်းပညာဟာကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းမှာအသုံးဝင်ပါတယ်.
Hand Baler စက်သည်တစ် ဦး တည်းလုပ်ကိုင်သောလယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာဖြစ်ပြီးနွေ ဦး ပေါက်သောဖိအားပေးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်, Bales ထိရောက်စွာစေရန်, Lever ၏အကူအညီဖြင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို baler ထဲသို့စွန့်ပစ်ပြီး compression လုပ်ရန်ကောင်းမွန်စွာနေရာချထားသည်။, အားဖြင့်သိပ်သည်းထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်. ဒါ့အပြင်, အသုံးပြုသူသည်သူတို့၏စက်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဘီးနှင့်စက်ကိုရွှေ့နိုင်သည်.
1.လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော baler စက်၏အဓိကဘောင်ကိုသံမဏိနှင့်သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ၎င်းသည် manual silage baling machine ၏ compressor capacity ကိုသေချာစေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းစက်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုအာမခံပါသည်. အပြင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းသက်သာစေသည်.
2.လျော့နည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို manual မြက်ပင် baler, လျင်မြန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မြင့်မားသောပြည့်စုံသောအကျိုးကျေးဇူး, အင်ဇိုင်းပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့်အရည်စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကိုအလွန်လျှော့ချနေကြသည်,အဆိုပါ silage အရည်အသွေးကောင်းပါတယ်, ရေနံစိမ်းပရိုတိန်းပါဝင်မှုမြင့်မားသည်, နှင့်နို့အထွက်နှုန်းအလွန်တိုးတက်လာသည်.
3.ဝယ်ယူသူ၏လိုအပ်ချက်အရ compression chamber အရွယ်နှင့် package အရွယ်အစားကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
4.လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်မရှိပါ ,manual hay baling machine ကို manually လည်ပတ်သည် ,၎င်းသည်လျှပ်စစ်မီးမရှိသောဒေသတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် .
လက်စွဲ silage baling စက်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ parameters တွေကို
（kg / h） အော်ပရေတာပေါ်မူတည်သည်
Baler ပုံသဏ္.ာန် ရင်ပြင်
လျှောက်လွှာပစ္စည်းများ ရှိတယ်,ကောက်ရိုး ,silage ,ပလတ်စတစ်စသည်တို့